अब अन्तिम झट्का दिँदै विपक्षी ! यस्तो निर्णयका लागि नागरिकता सहित संसद भवनमा भेला हुँदै नेता – Sapana Sanjal
अब अन्तिम झट्का दिँदै विपक्षी ! यस्तो निर्णयका लागि नागरिकता सहित संसद भवनमा भेला हुँदै नेता
विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि अहिले उनीहरूले आफ्ना सांसदलाई नागरिकतासहित संसद भवनमा भेला हुन निर्देशन दिएका छन्। आज तयारी सकिए आजै, नभए भोलि मुद्दा दर्ता गरिने नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।
शनिबार अपरान्ह नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पक्षमा उभिएका बहुमत सांसदहरु अदालतमा मु द्दा दर्ता गर्ने सहमति भएका कारण आइतवार विहान सांसदहरु संसद भवनमा जम्मा हु लागेका हुन् । यसका लागि विपक्षी दलका नेताहरु सिंहदरबारमा भेला हुन लागेको काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन् ।
उनकाअनुसार आजै सम्भवत सर्वोच्च अदालतमा मु द्दा दर्ता गरिइने छ । काँग्रेस नेता रमेश लेखकको संयोजनमा कानुनविद्हरु शनिबारदेखि नै आवश्यक कागजपत्र तयार पार्ने काम जारी छ ।
Prevघर भत्किँदा एकै घरका तीन जनाको मृत्यु, अन्य ४ छोरीहरू भने भाग्यले बाँचे
Nextअन्तत: फुट्यो एमाले ! माधव नेपाल पक्षका नेताले दिए निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताको निवेदन
लाखौं रुपैयाँ नगदसहित पाँच जुवाडे काठमाडौंबाट पक्राउ
बिना सेफ्टी हेलिकप्टरबाट नेपाली सेनाले हामफालेको भिडिओ भाइरल [भिडियो सहित] हेर्नु होस।।